Xukuumaddii Kheyre oo Maxkamad lasoo saarayo todobaadkaan | KEYDMEDIA ONLINE
Xukuumaddii Kheyre oo Maxkamad lasoo saarayo todobaadkaan
Keydmedia Online ayaa waxey heshay macluumaad sheegaya in todobaadka soo socda (7-13 September) Maxkamad lasoo saari doono Raisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo qaar kamid ah Wasiiradda Xukuumadda.
Ilo ay Keydmedia Online ka heshay Madaxtooyadda Soomaaliya, oo aan dooneyn in la magacdhabo, ayaa inoo sheegay in ma'suuliyiintaan lagu eedeenayo Musuq-maasuq iyo lacag laga dhunsaday qasnada bangiga dhexe ee Soomaaliya, Maxkamadna lasoo saari doono todobaadkaan fooda nagu soo haya.
Wasiiradda Maxkamadda looga yeeri doono ayaa kala ah:
Wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta, Cabdi Canshuur Xasan
Wasiirka Amniga - Maxamed Abuukar Islow Ducaale
Shaqada iyo Arrimaha Bulshada - Sidiiq Xirsi Salaad
Isha ay KON ka heshay macluumaadkaan ayaa sidoo kale sheegtay in amarka furitaanka kiiskaan uu ka yimid Xafiiska Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Xukuumadda Federaalka ayaa haatan ah mid ku-meel-gaar ah kadib markii kursiga cod aqlabiyad ah looga tuuray RW hore Xasan Cali Kheyre, kaas oo lagu eedeeyay in uu ku fashilmay ka-mirodhalinta yoolalkii ay xukuumaddiisu degsatay saddex sano iyo bar ka hor.
Todobaadkii lasoo dhaafay ayee aheyd markii Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka Dr Suleymaan Maxamed Maxamuud uu digniin adag u diray masuuliyiinta iyo hay'adaha caadeystay musuq-maasuqa iyo ku daneysasiga awoodda Xafiisyada dawligaa.
Sidoo kale, Maxkamadda Gobolka ayaa dhawaanahaan xukunno xabsi ganaax lacageed ah isugu dartay masuuliyiin ka tirsan Dowladda iyo shaqsiyaad kale oo lagu helay falal la xiriiro musuq Maasuq iyo xatooyo Xoolo Dadweyne.
Wixii kusoo kordha warkaan kala soco Keydmedia Online.